Tanjon’ny Fanontàna 2018: Fanamboarana Endrin-dahatsoratra Ho an’ireo Tantara Mahazatra Ao Amin’ny Advox · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2018 7:41 GMT
Sary “Fampianarana Ifarimbonana” avy amin'ny Innovation Co-Lab ao amin'ny Anjerimanontolo Duke ary ampiasaina amin'ny sehatra ho an’ny daholobe amin'ny alàlan'ny Noun Project.
“Mpikatroka Mafàna Fo ao [FIRENENA] Nosamborina noho ny Fanoratana momba ny [OLANA MAHAKASIKA NY ZON’OLOMBELONA] tao amin'ny Twitter”
“Sivanin’ny Facebook ireo Fanehoana momba ny [RAHARAHA PÔLITIKA MAFANA] ao [FIRENENA]”.
Hatramin’izay nanombohako ho mpilatsaka an-tsitrapo mpamoaka lahatsoratra ao amin’ny rakitry ny Advox-n’ny GV tamin'ny 2012, nipoitra matetika tao anatin'ny matoandahatsoratra navoakako ny lohatenim-baovao toy izao — miampy ireo lahatsoratra tsotra sy tsy mivilivily izay niaraka taminy matetika. Nisy fotoana ary tamin'ny faramparan'ny taona 2014, nanomboka tsapako ho toy ny fanao mahazatra ny famoahana azy ireo.
Matetika, tsy ela ny anaovako ny drafitry ny tantara rehefa miseho ny tantara toy ireo, miampy ny lisitra fohy mirakitra ireo fanontaniana ilaina valiany.
Na mety hahatonga ahy tsy hanana asa aza dia faniriako ny tsy hisian'ireo tantara ireo — izay miantomboka amin'ny fandrahonana olona iray izay niresaka an-tserasera ho an'ny tombontsoam-bahoaka avokoa. Saingy tsy nahita azy ireo nihena aho hatramin'ny taona 2012. Mihamitombo hatrany aza ny tranga toy izao. Ary toa mihabetsaka isan-taona ny isan'ireo mpikambana anatin'ny GV izay iharan’ny fampihorohoroana toy ireny amin’ny fomba mivantana na ankolaka.
Noho izany ny tanjoko voalohany amin'ny fanontàna 2018 dia ny fikasàko hanamboatra andianà endrin-dahatsoratra izay hanamora kokoa ny asan’ny mpikambana anatin'ny GV (vaovao sy efa somary tranainy) amin’ny fanoratana lahatsoratra mombanà tranga fampihorohoroana miantraika amin'ny zon'ny olona iray hiteny an-tserasera.
Hanomboka aminà endrin-dahatsoratra roa aho: hanome taridàlana ho an'ny fanaovana tatitra mombanà fisamborana na famonjàna ny voalohany; ny faharoa kosa hanome taridàlana ho an'ny fanaovana tatitra mombanà trangam-mpanivanana iray ao amin'ny haino amanjery sôsialy. Samy trangan-javatra fahitanay isan'andro anatin'ny asanay izy roa ireo, ary samy ilàna karazam-pampahalalana manokana momba ny lalàna misy eny an-toerana sy ny pôlitikan'ny orinasa ary ny tontolon'ny teknôlôjia izay namoahana ny resaka.
Samy tsy hihoatra ny pejy roa ireo endrin-dahatsoratra, ary samy havoaka ao amin'ny fizaràna misy ny Torolàlan'ny Advox ao amin'ny Bilaogy Iraisana.
01-15 Martsa: Dingana fikarohana – mianatra ny tondrozotra sy ny fenitra famoahan-dahatsoratra momba ny fampahalalam-baovao amin’ny haino amanjery sy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona izay mety hanome taridàlana momba ireo lohahevitra ireo, indrindra anatin'ireo faritra mifandraika amin'ny lalàna sy ny teknôlôjia
15-31 Martsa: Mamolavola ny drafitra voalohany hanaovana ireo endrin-dahatsoratra
01-15 Aprily: Mizara ny drafitra aminà toniandahatsoratra vitsivitsy ho fanitsiana – ao anatin’izany ireo toniandahatsoratra sasany izay miara-miasa matetika na tsia amin'ny Advox.
15-30 Aprily: Mamolavola ny drafitra faharoa hanaovana ireo endrin-dahatsoratra
01 Mey: Mamoaka ireo endrin-dahatsoratra ary manomboka mijerijery izay hahafahana mampiasa azy ireo
Samy ho mora kokoa, haingana kokoa ary hahomby kokoa ny asan'ny mpanoratra sy ny toniandahatsoratra amin'ny lahatsoratra tahaka ireny raha mahomby ireo endrin-dahatsoratra ireo. Ary mety ho tonga amin'ny fihamaroan’ny lahatsoratra milaza ireo karazana tantara ireo izany – izay fantatsika fa tsy ho tapitra mihitsy.
Raha toniandahatsoratra ao amin’ny GV ianao na mpandray anjara anatin'ny Advox ka te hanampy amin'ny famolavolana ireo endrin-dahatsoratra, miangavy anao mba hampilaza ahy!